ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary စက်တပ် actutaor ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary စက်တပ် actutaor
ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary စက်တပ် actutaor
AOX-မေး စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary စက်တပ် actutaor ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လေးပုံတပုံ အလှည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် လျှောက်လွှာများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ဘောလုံးကို, လိပ်ပြာ, ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် တူသော usages.AOX ယူ ကြီးမားသော အရေးပါပုံ သို့ ကုန်ပစ္စည်း ဒီဇိုင်း, နှင့် အဆိုပါ ပုံစံ အသင်းအဖွဲ့ hအဖြစ် အားကြီးသော စွမ်းအား ၏ ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု။ AOX hအဖြစ် ပြည့်စုံသော ပညာတတ် အိမ်ခြံမြေ အခွင့်အရေး နှင့် များသော စက်မှုလက်မှု မူပိုင်ခွင့်။ ကျွန်တော်တို့ excpect သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် အဆိုပါ အနား အနာဂတ်။
AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary မော်တော် actutaor များအတွက် 6000Nm မှ 50Nm ထံမှ 1. အမျိုးမျိုးသော output ကို torque ။
(AOX-Q-005/008/010 မှလွဲ. ) AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary မော်တော် actutaor များအတွက် 3. torque switches များ
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်အများဆုံးကျေနပ်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ ISO9001 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဝယ်ယူရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှ, ဝန်ဆောင်မှု, etc နှင့်တစ်ဦးချင်းစီလင့်ခ်များအတွက်ထူထောင်မှတ်တမ်းတင်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအနေဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုခိုင်ခံ့စေပြီ။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးကို၏လစာတိုး data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုအပ်သည်အတော်လေးကောင်းစွာသိကြ၏။ AOX AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary မော်တော် actutaor များ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်မှအရည်အသွေးမြင့်ဒေတာစုဆောင်းရန်မကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှမြောရနှင့်ပစ္စည်းရွေးချယ်ရေးအထောက်အကူပြု, စိတျအပိုငျး, အောင်စမ်းသပ်နှင့်မှန်မှန်ဖျက်ဆီးစမ်းသပ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် နှင့် AOX-မေးစီးရီး၏အရည်အသွေးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary မော်တော် actutaor အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည် actutaor စက်တပ်ပုံမှန် AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary, စတော့ရှယ်ယာများတွင်ရှိသည်။
hot Tags:: ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary စက်တပ် actutaor, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်